Yakanyanya Kufanirwa Masking Firimu Mugadziri uye Fekitori | Aosheng
Prefolded masking firimu inonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuvaka yekupenda kana kuchengetedza. Yedu masking mafirimu anogona kuve akakodzera kune ese epamba uye ekunze kushandiswa.
✦ Chinyorwa: HDPE plastiki
✦ Hapana tepi yakasungirirwa, inogona kushandiswa kune imwe nzvimbo.
Ruvara: Rakajeka, chena…
Saizi: 2x25m, 2x50m…
✦ Yakapetwa zvakapetwa ruoko saizi kuitira kuti zvive nyore kushandisa.
Prefolded masking firimu inonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuvaka yekupenda kana kuchengetedza. Yedu masking mafirimu anogona kuve akakodzera kune ese epamba uye ekunze kushandiswa. Izvo zvigadzirwa zvedu zvechinyakare uye zvakakurumbira. Iyo ficha ndeye 100% HDPE masking firimu. Inofananidzwa neyekunyepedzera masking firimu, Yakatemerwa masking firimu haina tepi yakasungirirwa, iyo inogona kushandiswa kune yakawanda nzvimbo. Prefolded masking firimu yakawanda-yakapetwa kusvika kumaoko saizi kuitira kuti zvive nyore kushandisa.
Iyo masking firimu ine corona kurapwa, iyo inogona kupinza iyo pendi uye kudzivirira kubva pamusoro peiri 2ndkusvibiswa. Iyo masking firimu yaizovandudza yako yekupenda basa kugona, chengetedza vashandi / nguva nemari.
Prefolded masking firimu inonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuvaka yekupenda kana kuchengetedza.
Yedu masking mafirimu anogona kuve akakodzera kune ese epamba uye ekunze kushandiswa.
Inofananidzwa neyekunyepedzera masking firimu, Yakatemerwa masking firimu haina tepi yakasungirirwa, iyo inogona kushandiswa kune yakawanda nzvimbo.
Zvakare, mutengi anogona kusarudza yako tepi ichishanda pamwe neyakafanirwa masking firimu.
Details: Yakatemerwa Masking Firimu
- Nyowani HDPE zvinhu.
- Inogona kunge iri yekurapa korona.
- Dzivirira kubva kune yakawanda solvent uye kusvibiswa.
- Hapana masara mushure mekuidhonza
- Yakapetwa zvakapetwa ruoko saizi.
- Yakanaka kushanda.
- Sevha Basa, nguva nemari.
isina musoro kana ∅20mm
Ichena, yakajeka kana vamwe
1 roll / bhegi, ipapo mubhokisi
isina musoro kana ∅35mm
Ongorora: Chigadzirwa chinogona kuitwa maererano nechikumbiro chavatengi chakakosha.
Pashure: Kudonha Sheet
Zvadaro: (Cloth tepi + LDPE) Yakagadzirwa Masking Firimu
Floor Kudzivirira Firimu
(80-masking tepi + HDPE) Yakagadzirwa Masking Firimu
Cutter yeKuvaka Firimu
LDPE Dema Kuvaka Firimu
(Cloth tepi + HDPE) Yakagadzirwa Masking Firimu